NichePhone-S kaadị ekwentị gam akporo | Akụkọ akụrụngwa
N'oge ndị a, anyị na-arịọ maka obere na obereOtu ihe atụ bụ ekwentị mkpanaka, anyị chọrọ iri ọtụtụ ọdịnaya na obere ekwentị, yabụ, dịka ọmụmaatụ, ekwentị ndị na-ewu ewu nwere obere ihuenyo enweghi ngwụcha, na-ebelata okpokolo agba na ike ọgwụgwụ. Agbanyeghị, maka ndị chọrọ ekwentị na ịdị mma nke nha karịa ihe ọ bụla, a ka nwere ụzọ ọzọ.
Ekwuwaala ọkwa obere ekwentị a nke ọma na eziokwu bụ na ọ dọtara uche anyị, n'ezie enwere ọtụtụ ndị ọrụ ga-enwe obi ụtọ ịnweta ọrụ dị mma nke NichePhone-S, ekwentị gam akporo nke juru ya anya na obere pere mpe ya, ka anyị mata ya nke ọma.
Iji malite, ibu ya dị elu karịa ihe niile, naanị gram 39 na ekwentị na-ewe ohere nke kaadị akwụmụgwọ, ikekwe dị ka onye na-azọpụta ndụ ma ọ bụ ihe ọzọ n'ime ụgbọ ma ọ bụ akpa azụ nwere ike ịbụ nnukwu echiche. Kedu ka ọ ga - esi bụrụ nke ọzọ, ọ gụnyere usoro nke obere atụmatụ na - eme ya smartphone, nke mbụ bụ na ọ gụnyere gam akporo, nke abụọ bụ na o nwere, dịka ọmụmaatụ, Bluetooth ka anyị nwee ike ijikọ ya na ekweisi ọbụla anyị hụrụ dabara. O di nwute na ọ bụghị ihuenyo niile, ọ nwere usoro bọtịnụ ndị na-adịkarị na ekwentị niile, ihuenyo ahụ ga-enye anyị ozi dị oke mkpa.
Ekwentị a nwere oke nke milimita isii ma na-akwado njikọ data 3G, ọ bụghị ihe ọjọọ ma ọ bụrụ na anyị tụlee na ha chere na ịmalite ya n'ahịa maka ihe dị ka euro 88, nke na-adịghị elebara arụmọrụ ya anya, mana ọ bụghị dị oke ọnụ ma. Ee n'ezie, Ichefu banyere itinye ngwa na gam akporo gị naanị na batrị 550 mAh, ịgaghị enwe ike ịme ya. Nwere ike ijide ya site na November 10 ọzọ na weebụsaịtị nke Ọdịnihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » NichePhone-S kaadị gam akporo gam akporo